Maxaa Cusub – Page 44 – Shabakadda Amiirnuur
Faahfaahin ayaa kasoo baxaysa dagaal shalay ka dhacay mid kamid ah degaanada hoos taga magaalada Kismaayo halkaasoo ay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku beegsadeen askar ka tirsan kuwa Jubbaland. Dagaalka dhex maray labada dhinac oo in muddo ah soconayay islamarkaana la isku adeegsaday hub culus iyo mid fudud ayaa waxaa […]
Wuxuu ahaa weerar kamiin ah oo galabta ka dhacay meel u dhow degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo kaasoo askar ka tirsan Milatariga Xarakada Al-Shabaab ay ku wajaheen ciidamo ka tirsan kuwa Kenya oo socdaal ku jiray. Askarta Kenyaanka ah ayaa markii hore ka baxay Ceelwaaq waxaana ay ujeedadoodu ahayd iney […]
Ciidamada Mareykanka ee duullaanka ku jooga wadanka Afghanistan ayaa gummaad daran ugeystay dad shacab ah oo munaasabad aroos ku dhiganayay deegaan dhaca Koonfurta wadankaasi. Duqeyn xagga cirka ah oo diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay ka geysteen degmada Muusa Qalac ee katirsan gobolka Helmand ayaa sababtay dhimashada ugu yaraan 40 qof oo […]
Madaxweynaha DF, oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa waxaa la gudoonsiiyay billad taasoo abaal gud u tahay maamul wanaag la sheegay iney dowladdu sameysay sannadkan. Xubno Mareykan ah ayaa gudoonsiiyay billadda isagoo faraxsan oo dhoolla caddeynaya, waxaana si gaar ah loogu ammaanay kaalintii uu ka geystay heshiiskii Itoobiya iyo eratariya […]
Sawirro: Al-Shabaab Oo baahiyay Sawirrada Dagaalkii Ceel Saliini.
Idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha Afka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa baahisay sawirra laga soo qaaday dagaalkii shalay deegaanka Ceel Saliini ku dhexmaray ciidamada Mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka. Sawirrada ayaa laga dheehanayaa ciidamada Al-Shabaab oo si buuxda ula wareegay gacan ku heynta saldhiga, islamarkaana daabulanaya saanado hub ah. Waxaa sidoo […]
Degdeg: Al-Shabaab oo Cagta Mariyay Xero Ciidan oo Ku Taalla Duleedka Marko.
War goordhow nagasoo gaaray gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal xooggan uu ka socdo deegaan kaabiga ku haya magaalada Marka ee xarunta gobolka. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada Xarakada Al Shabaab ay weerar xoog ku gal ah ku qaadeen saldhig melleteri oo maleeshiyaadka dowladda Federaalka ay ka sameysteen […]
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax xooggan oo maanta gudaha magaalada Muqdisho lagula beegsaday saraakiil katirsan ciidamada Sirdoonka dowladda Federaalka Soomaaliya. Wararka laga helayo degmada Dharkeynleey ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 sarkaal oo katirsan ciidamada Nabad sugidda ay dhinteen 2 kalane ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii qarax […]
Waa arrin dhif iyo Naadir in beelo Soomaaliyeed ay maalin qura 600 oo neef geel ah diyo ukala qaataan, arrintan waxay ka dhacday gobolka Hiiraan oo intiisa badan lagu maamulo Shareecada Islaamka. Beelaha Xawaadle iyo Abgaal ayaa diyo ku kala qaatay gobolka Hiiraan, maamul islaami ah oo halkaas ka jira […]
Ciidamada Shisheeyaha Oo lagu weeraray wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye.
Ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday kolonyo ciidamo Shisheeye ah oo kasoo baxay xerada Xalane ee magaalada Muqdisho. Kolonyadan ayaa sahay u siday ciidamada Shisheeyaha ee jooga deegaanka Ceel Jeelle ee duleedka magaalada Marko,waxaana la weeraray xilli ay marayeen deegaanka Siinka-dheer oo u dhexeeya Muqdisho iyo […]
Wararka naga soo gaaraya dhulka Soomaaliyeed ee ay Kenya heysato ayaa waxay sheegayaan in uu dagaal halkaa ka dhacay khasaare lagu gaarsiiyay askarta xukuumadda Nairobi, iyadoo haatan faahfaahin laga helayo. Ciidamo Kenyaati ah oo kasoo baxay xero ay ku leeyihiin duleedka degaanka Ceel-raam ee degmada Ceel-waaq ayaa waxaa weerar ku […]